Iyada oo lagu sharfayo xusuusta George Floyd, Machadka McKnight wuxuu abaalmarin doonaa $100,000 oo deeqo ah oo aan loo baahnayn oo la siinayo 10 hay'adood oo ka dhigaya Minnesota meel soo dhaweyn, taageer, iyo loo dhan yahay leh.
Kuwani deeqaha ah ee hal-ku-kalsoonaanta ku saleysan waxay aqoonsan yihiin kooxaha ka baxsan kuwa hadda na caawiya waxayna xaqiijinayaan shaqadooda xagga bogsashada iyo caddaaladda nidaamka.
Toddobaad kasta 10 usbuuc, waxaan ku dhawaaqi doonnaa abaalmarin qaata cusub oo ku xiran aragtideena ku aaddan sinnaanta Minnesota - nooca meesha kicin lahaa oo karti u yeelan lahayd, oo aan la bakhtiin, nolosha George Floyd, Philando Castile, Jamal Clark, Daunte Wright, iyo qaar kaloo badan. Ururadan ay hogaaminayaan Madowga ee Twin Cities iyo Greater Minnesota waxay qaadayaan qaab dhameystiran iyo mid dhaqameed si loo xoojiyo loona bogsiiyo bulshada Madoow iyagoo taageeraya shaqsiyaadka, qoysaska, iyo bulshada. Shaqadoodu waxay meteleysaa tusaale ka mid ah xalalka bulshada ee loogu talagalay la dagaallanka midabtakoorka nidaamka.
Codka Dhaqanka (mashruuc ka socda Machadka WE WIN)
Deeqdan ayaa ah WAAN GUULEYSANAY Machadka, oo ah hay'ad bulshada ku dhisan oo aan macaash doon ahayn una dhaqanta sidii kafaala-qaadaha maaliyadeed ee Codka Dhaqanka. Codka Dhaqanka wuxuu abuuraa oo ilaaliyaa Meel Madoow oo loogu talagalay dadka Madow inay wax ku bartaan kuna tababaraan farshaxanka dhaqanka ee caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jir ahaaneed. Laga soo bilaabo 2008, Codka Dhaqanka wuxuu u fidiyay bogsiin iyo fayoobaanta bulshada Madow iyada oo loo marayo dhaqanno ay ka mid yihiin durbaanka, qoob ka ciyaarka, heesaha, sheekooyinka, farshaxanka muuqaalka ah, iyo inbadan. Waxay bixisaa Guri Dhaqan oo casri ah oo lagu iibiyo dharka 'Queer Black bilicsanaanta', iyo Hal Qol Dugsi oo u jira abuurista iyo ka-qaybqaadashada khibradaha waxbarasho ee xorriyadda ee ballaadhinaya muuqaalka Madow.
Kaniisada Liberty Community Northside Healing Space
Kaniisada Beesha Liberty, PCUSA's Booska Daaweynta Woqooyi wuxuu u adeegaa bulshada Northside ee Minneapolis iyo dhammaan kuwa la ildaran saameynta midab kala sooca iyo dhiig-miirashada galmada. U adeegidda in ka badan 1,500 oo qof sannad kasta, booska ayaa u siinaya meel ammaan ah ka qaybgalayaasha, bulshada, iyo la-hawlgalayaasha inay isugu yimaadaan; kooxaha taakulaynta ee dhibanayaasha faraxumeynta galmada; meel laga helo bogsiinta shaqada iyo ilaha; iyo hogaaminta dhalinyarada, waxbarashada, iyo taageerada qoyska oo dhameystiran. Xorriyaddu waxay si qoto dheer u dhageysataa bulshadeeda waxayna leysarka-diirada saaraysaa joojinta dulmiga iyo dhiig-miirashada iyadoo loo marayo nasasho, xusuus, iska caabin, iyo soo nooleyn.
Barnaamijka Awoodsiinta NAACP
NAACP waxaa la aasaasey sanadkii 1909, waa ururka ugu da'da weyn uguna weyn ururada xuquuqda madaniga, ujeedadiisuna tahay in la hubiyo sinnaanta siyaasadeed, waxbarasho, bulsho, iyo dhaqaale ee dadka oo dhan isla markaana la tirtiro midabtakoorka ku saleysan isirka. Ku Barnaamijka Awoodsiinta NAACP waxay ka shaqeysaa sidii loo dhisi lahaa siyaasado cadaalad ah oo loo dhan yahay, nidaamyada daryeelka caafimaadka, dhaqaalaha, iyo fasalada. Mutadawiciinteedu waa shaqaale u heellan, abaabulayaal, hoggaamiyeyaal, iyo xubnaha bulshada oo sii wada u halganka caddaaladda bulshada ee dhammaan Ameerika.
"Waxaan aaminsanahay in dadka madow ee Minnesota ay dib u soo ceshanayaan haybaddooda ayna hubinayaan in codkooda la maqlo."
- Leslie Redmond, Madaxweynihii hore ee Minneapolis NAACP
The George Floyd Global Memorial, oo ku yaal isgoyska 38th Street E iyo Chicago Avenue S ee Minneapolis, waa xusuus nool oo ku dhiirrigelisa dhammaan dadka inay raacaan caddaaladda. Isgoyskan, dadku waxay ka kala yimaadaan adduunka oo dhan si ay ugu istaagaan midnimada caddaaladda jinsiyadda, oo ay u muujiyaan xanuunka iyo rajadooda, ayna ixtiraamaan magacyada dadka u dhintay dhimashada xaqdarrada ah. Maanta, waxaa jira in ka badan 2,500 oo ah waxyaabo hal abuur leh oo farshaxanka waddooyinka ah, sawirro ay carruurtu leeyihiin, calaamadaha mudaaharaadka, dhagaxaanno, waraaqo, ubaxyo iyo in ka badan, oo ay daryeelaan in ka badan 20 tabaruceyaasha bulshada ah. Ururku wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo hubin lahaa in sheekooyinka bulshada loo sheego loona isticmaalo ilaha waxbarashada jiilalka soo socda.
Ururka Horumarinta Afro American waa hay'ad samafal ah oo samafal ah oo la shaqeysa qoysaska New American ee la hayb-sooco ee ku nool aagga Fargo-Moorhead, iyagoo ku taageeraya degganaanshahooda maaliyadeed iyo yoolalka shaqadooda baahiyaha aasaasiga ah, shaqada, iyo adeegyada waxbarashada dhalinyarada. Maaddaama ay tahay hay'ad shaqaale oo dhan-Mareykan ah, ururku wuxuu la wadaagayaa riyada beesheeda heer shaqsiyeed, oo ay ku midoobeen waayo-aragnimada wadajirka ah ee ah New Americans. Waxa ka dhigaya ururka mid gaar ah waa inay ku bixiso adeegyo jawi dhaqameed wax ka qabta, halkaasoo kaqeybgalayaashu ay dareemayaan amaan oo lagu taageeray inay la wadaagaan yoolalka muddada dheer, aqoonsadaan waxa dib u dhigaya, iyo inay ka faa'iideystaan awoodda bulshadooda si ay u abuuraan mustaqbal ifaya.
Shaqadeenu waa mid aad muhiim u ah maanta sidii hore maadaama aan la kulanno dhibaato caafimaad, dhibaato dhaqaale, iyo dhibaato bulsheed — iyo midab takoor nidaamsan ayaa udub dhexaad u ah mid walba. Haddii aan waligeen dooneyno inaan asalka u dhigno dhammaan saddexda arrimood, markaa waa inaan baabi'innaa cunsuriyadda nidaamsan. ”
- Xukun Dabar, agaasimaha fulinta
Wada Kaca Qoyska
Wada Kaca Qoyska wuxuu diiradda saarayaa nidaamka qoyska oo dhan iyo kaabayaasha dhaqaalaha si loo abuuro fursado lagu xirayo farqiga hantida iyadoo loo marayo iskaashi, waxbarasho, iyo gargaar farsamo. Barnaamijkeeda Xiriirinta Kororka ee Xiriirka Qoyska wuxuu la shaqeeyaa qoysaska (oo ay kujiraan aabayaasha iyo qoysaska aabaha) si loo yareeyo soo noqoshada dadka Madow, kuwa asaliga ah, iyo dadka midabka leh (BIPOC) iyo Bulshooyinka saboolnimada ee daryeelka korinta dhaqanka, iyo kordhinta isku xirnaanta qoyska iyo joogtaynta BIPOC iyo Bulshooyinka carruurta saboolka ah. Iyada oo loo marayo raasamaalkeeda bulsheed iyo adeegyadeeda, ururku wuxuu siiyaa qoysaska iyo shakhsiyaadka fursad koboca dhaqaalaha iyo isku xirnaanta bulshada: "hal ganacsi, hal qoys, iyo hal beelba mar."
Ururka Dariska ee Powderhorn Park waa hay'ad dhisaysa bulshada oo u adeegaysay Koonfurta Minneapolis muddo 41 sano ah. Adeegga ujeeddadeeda dhexe si loo caawiyo caafimaadka bulshada, ururku wuxuu u ololeeyaa, iyadoo lala kaashanayo daneeyayaasha kala duwan, si loo helo ilo muhiim ah oo ku filan si loo yareeyo farqiga iyo sinaan la'aanta. Mid ka mid ah tusaalayaasha ayaa ah dadaalkeeda soo ifbaxaya ee Sinaanta Jinsiga & Caafimaadka Bulshada (REACH) ee mataanaha Magaalooyinka Mataanaha ah. REACH waa daabicitaan dijitaal ah oo lagu doonayo in lagu weyneeyo laguna muujiyo dadaallo ballaaran oo salka ku haya sinnaanta. Wada-hawlgalayaasha xubnaha ee Isbahaysiga Soo-kabashada Hoggaaminta Lake Street, REACH waxay ku soo baxday adeeg si loo shidaal-siiyo caafimaadka bulshada, soo-kabashada, iyo bogsashada ka dib kacdoonkii shacabka ee ka dhashay jawaab celinta dilkii George Perry Floyd, Jr.
The Shabakada Cadaalada ee Bogsiinta Minnesota waa bulsho isir ah oo ka kooban dhakhaatiir iyo shaqaale dhaqameed kuwaas oo udub dhexaad u ah fayoobaanta Madoow iyo bunni iyada oo loo marayo is caawinta, daryeelka guud, iyo shaqada midnimo. Iyada oo bulshadeeda kaladuwan ee fayoobaanta iyo bogsadayaasha ku shaqeeya cadaaladda, ururku wuxuu ku taageeraa shakhsiyaadka ka socda dhammaan qaybaha nolosha daryeel, taageero xagga caafimaadka, iyo soo kabashada iyada oo loo marayo kala-guurka nolosha ee waaweyn, dhalmada, qalliinka, dhaawacyada, iyo khasaaraha. Shabakadu sidoo kale waxay la tashataa oo ay lashaqeeysaa ururada, jaamacadaha, iyo dowlada sinaanta caafimaadka ee caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, caafimaadka maskaxda, caymiska, iyo helitaanka daryeelka dhaqan iskuwaangashan.
Guddiga Beerta Nabadda ee Philando Castile
Philando Castile wuxuu naftiisa u huray sidii uu cunno iyo naxariis u siin lahaa carruurta dhigata Iskuulka Dadweynaha ee Saint Paul.
6-dii Luulyo, 2016, waxaa lagu dilay toogasho ay booliisku ku lug lahaayeen oo ka dhacday waddada Larpenteur Avenue ee Falcon Heights, Minnesota. Isagoo ka jawaabaya musiibadan, ayaa Guddiga Beerta Nabadda ee Philando Castile waxay dhiirrigelisaa xilli cusub oo bulshada lagu bogsiinayo, dib-u-heshiisiin, midnimo, iyo is-beddel iyadoo la abuurayo feker iyo nabad isugu imaada goobtii toogashada ka dhacday. Goobtan bannaanka ah ee loogu talagalay dib-u-heshiisiinta iyo isbeddelka joogtada ah Soo-booqdayaasha maxalliga ah, kuwa waddaniga ah, iyo kuwa caalamiga ahba waxay si iskood ah u bixiyaan tabarucaadyo, farshaxan meel, iyo farriimo qoraal ah, qaar badanna waxay qoysaskooda u keenaan inay la kulmaan dareenka bogsashada ee booska dhiirrigeliya Boosku wuxuu ka dhigayaa jacaylka bulshada ee Philando inuu na muuqdo wuxuuna ina xusuusinayaa inaynaan waligeen ilaawin wixii dhacay.
The Xarunta Fayoqabka Dhaqanka waa urur afrikaan Mareykan ah oo aan macaash doon ahayn oo wajiyo badan kuna saleysan fikirka ah in markii dhaqanka iyo aqoonta bulshada la barto lana qiimeeyo, ay yihiin aalado awood badan u leh caafimaadka, bogsiinta xusuusta, dhismaha bulshada, iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxaa la aasaasay 1996, Xarunta waxay la shaqaysaa shaqsiyaadka, ganacsatada, kooxaha bulshada, nidaamyada daryeelka caafimaadka, iyo wakaaladaha dawlada si ay uga caawiyaan ka gudubka caqabadaha iyagoo si fiican u fahmaya dhaqankooda, dhaqankooda, iyo naftooda. Waxaan aqoonsan nahay shaqada Xarunta inay muhiim u tahay abuurista caafimaad waarta iyo fayo qabka bulshada, iyo caawinta hogaamiyeyaal badan oo Afrikaan Mareykan ah oo ku kala baahsan Minneapolis inay helaan jaangooyooyinkooda iyo inay ogaadaan xalka dhaqan ahaan ku saleysan dhibaatooyinka dunida dhabta ah.
“Muddo 25 sano ah, waxaan ka faa'iideysaneynaa xikmadda odayaasheenna iyo baritaankeena dhaqanka si aan isu bogsiino oo aan u dhisno beel xoog leh. Sidii sanadbaadkii la soo dhaafey ay ahayd tan iyo dilkii Walaalkii Floyd, taageerada ay muujiyeen hay'adaha hoggaamiya sida McKnight waxay i siinayaan rajo. Kaliya wadajir ayaan u baabi'in karnaa midabtakoorka nidaamsan.
- Oday Atum Azzahir, agaasimaha fulinta iyo aasaasaha Xarunta Fayoqabka Dhaqanka